ESI EWEPU XBOX NA WINDOWS 10 - WINDOWS - 2019
Iwepu Xbox na Windows 10 Os
Bart PE Builder bụ usoro bara uru nke na-enyere aka n'ịmepụta ihe oyiyi disk ma ọ bụ na-ede ihe oyiyi a na ngwaọrụ nchekwa. N'agbanyeghị na e nwere ọtụtụ ngwọta yiri nke ahụ n'oge a, nke a nwere otu ihe: inwe ihe nchekwa nchekwa na onyinyo ahụ, onye ọrụ ga-enwe ike ịgba ọsọ Windows XP na Windows Server 2003 naanị site na ijikọ ngwaọrụ nchekwa na kọmputa. Usoro Bart Bart bụ maka ọrụ nke usoro, nke na-enye ọrụ niile dịnụ.
Ịmepụta ihe oyiyi ISO
Iji mepụta oyiyi dị njikere, ọ bụ iji nweta faịlụ nwụnye Windows. Na ọdịdị n'ọdịnihu, na mgbakwunye na ihe ndị bụ isi, ị nwekwara ike ịgụnye ndị ọzọ, enweghị nke ga-emetụta ngwụcha.
Download ihe oyiyi ISO ka disk
Na mgbakwunye na eke, ihe oyiyi ahụ nwekwara ike ibudata na diski. Iji mee nke a, ịkwesịrị ịnwe faịlụ nwụnye, naanị na nke a, enweghi ike ibudata ihe oyiyi ahụ na diski ike, ma ozugbo iji kpo ọkụ ma ọ bụ CD. A na-edekọ ma ọ bụ site na StarBurn algorithm, ma ọ bụ site na CD-ndekọ algorithm.
Na Bart PE na-arụ ọrụ nwere nkwụnye inspe nwere ike ịnọchite anya na mgbakọ ahụ dị ka mmemme dị iche iche ma ọ bụ nkwụnye plug nke na-eme ka ọrụ Bart Bart dị mfe. Nhọrọ ndị a bụ nhọrọ, n'ihi ya, ha nwere ike nkwarụ, hazie, dezie, ma ọ bụ ehichapụ ya.
Inwe ihe omimi;
Ọnọdụ nke Russia;
Nnweta zuru ụwa ọnụ na n'efu;
Ọrụ ọsọ ọsọ
Enweghị ike ibudata na saịtị onye mmepụta ihe;
Ya mere, Bart PE Builder bụ usoro dị mfe nke na-adịghị emetụta ya dị ka ihe gbasara ọrụ, mana enwere akụkụ ya na-enye ya ohere ịpụ n'etiti ndị asọmpi.
Falco Graph Onye Nrụpụta Adobe Flash Builder Wondershare DVD Slideshow Nrụpụta Ihe Deluxe Onye na-ewu ụlọ
Bart PE na-arụ ọrụ - mmemme iji mepụta ihe oyiyi bootable maka USB-drive ma ọ bụ CD. Ezubere ịrụ ọrụ na ebe obibi BartPE, nke na-enye gị ohere ịga Windows XP (32-bit) na Windows Server 2003, na-eji kọmpụta kọmpat.
Onye Mmepụta: Bart Lagerweij